I-5G ne-transhumanisation yomuntu: uMartin Vrijland
I-5G nokudluliselwa komuntu
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-28 February 2019	• 32 Amazwana
Ukuthuthuka kwetheknoloji Okwamanje ezihambayo ngokushesha kangangokuthi abantu abaningi zingazi ukuthi kungenzeka. Isizukulwane abasebasha, mhlawumbe ezinye izinhlelo ze-TV futhi ubukele Discovery Channel noma abalandela ukuqeqeshwa lobuchwepheshe kungenzeka unolwazi kancane kangcono, kodwa uma cela othile owayedlula isilinganiso ucela uma bazi ukuthi isibonelo nanotechnology, uthola ukusabela kabi. Kodwa ulandele izitayela nentuthuko kwezobuchwepheshe, inikeza isithombe ezinhle izenzakalo zezombusazwe ukuthi zenzeka futhi uthola hhayi kuphela isithombe esicacile kungani imithetho neziqondiso yethulwe, kodwa kungani kubaluleke kangaka ubuchwepheshe pheze ezithile.
I-5G isibonelo esihle salokhu. Izindleko zisalondolozwa ukugcwalisa umhlaba ngama-receiver 5G wokudlulisela. Futhi uma nginitshele ukuthi konke lokhu kunomthelela ohlelweni lokugcina lobugqila lwe-digital, ubona nokuthi isikhathi sokubuka okuhleliwe sesiphelile. Sekuyisikhathi sokuguqulwa, njengoba kuchaziwe isihloko sami sangaphambilini.
Uma wazi okuthile mayelana nobuchwepheshe be-nano, ungase wazi nokuthi manje kungenzeka ukuvuselela zonke i-athomu noma i-molecule. Ngakho sikwazi ukukopisha i-DNA isikhashana. Akukhona lokho kuphela, singenza izinto zokusebenza ngezici ezintsha ngokuphelele. Okwamanje sekuvele kungenzeka ukuphinde ubhale i-DNA. Lokhu kwenziwa ngendlela ejwayelekile ye-CRISPR-CAS, okungahle umzimba womuntu ungafunde njengenhlelo yesofthiwe ye-Microsoft Word. Ngokusebenzisa le khodi yendlela ku-DNA yomzimba womuntu ingatholakala futhi ilungiswe. Uhlobo 'lokuthola & ukubuyisela' ukusebenza; njengoba nge-software ku-PC yakho.
Lapha ku-website iye yaxoxwa ngaso sonke isikhathi ukuthi kungani umthetho kufanele uqaliswe ukuze kuqinisekiswe ukuthi uhulumeni wabo bonke abantu bane-DNA ku-database. Ngokuphambene nalokhu, kumele kube nomthetho oqinisekisa ukuthi wonke umuntu kufanele amukele imigomo. Yiqiniso lokhu kwenziwa ngendlela yomgwaqo Inkinga, Ukuphendula, Isixazululo, lapho mass wayixova nasengqondweni ukwamukela lo mthetho, inkinga self-wadala noma ulele, isibonelo ngokwakha imisebenzi ngokwengqondo (PSYOP, funda: okuhleliwe emacaleni noma - nokuqubuka respectively- okuhleliwe igciwane). Uma uya ngokusebenzisa amadoda anjengo uPeter R. de Vries kakhulu undabamlonyeni amacala obugebengu ukwazi ukuxazulula nge-DNA njengegama eliwumlingo, kufanele ulethe uquqaba ku ukwamukelwa modi database-DNA kazwelonke. Uma ungakwazi niyidalule ke uya kuze kukhona umthetho okusheshayo yokugoma ayimpoqo kanye igciwane nokuqubuka kudingeka baqinisekise ukuthi abantu bakho kuyabethusa futhi ngokusebenzisa operation abezindaba ezinkulu (njenge-Ebola PSYOP), nawe kufanele isici kungenzeka eduze wokubaza.
Zombili izinto ziyadingeka ukuze kube nento ewusizo kakhulu, uma ufuna amandla obumbene phezu kwabantu njengesizwe. Ungabe ushintsha izakhi zofuzo ezivela 'efwini'. Okuwukuphela okudingekayo lapha ukuthi ungakwazi ukufaka igciwane lesithwali (okudingekayo ekusebenziseni indlela ye-CRISPR-CAS) kumuntu ngamunye ngokugoma. (Funda kabanzi ngaphansi kwevidiyo)
Isiphakamiso esiphezulu se-TED senkambo sibonisa kuphela izici ezinhle zalezi zintuthuko. Noma kunjalo, ngikukhomba ngengozi enkulu ekhona kulo. Uma ufuna ukukwazi ukwenza lokhu okungenhla, udinga inethiwekhi ezinzile kanye nenethiwekhi enezansi 'bandwidth' eyanele ukuze ukwazi ukuthola ukuthunyelwa kwekhodi oyifunayo.
Kodwa kukhona okuningi. Ngikhulume kaningi ukuthi u-Elon Musk wasungula inkampani ebizwa ngeNeuralink. Asizwa okuningi ngalokhu kumaphephandaba, ngoba ukugxila ikakhulukazi ku-Space X, Tesla kanye ne-Boring Company, kepha i-Neuralink ibaluleke kakhulu. Eqinisweni, zonke izinkampani zakhe zidlala indima ebalulekile ekushumayeleni kwabantu, ngoba isikhala X singaba nendima egcwele isikhala se-satellite ye-5G, i-Tesla ifaka isandla ukuthuthukiswa kwengqondo yokufakelwa futhi i-Neuralink ingaletha ubuchopho ku-intanethi. Kulo mongo, iNkampani yeBoring iyona engcono kakhulu, kodwa iyohambisana kakhulu nesifiso sokuba nokuxhumana njalo. Uma kungakapheli iminyaka embalwa ubuchwepheshe bufika emakethe lapho ubuchopho buya khona ku-intanethi, izwe lamathuba amasha avuleka, uma inethiwekhi ye-5G isilungile. Uma wazi ukuthi yiziphi izingxenye zobuchopho imisebenzi ethile edlalwa futhi, ngokwesibonelo, ngokuqondile uqondise izikhungo zazo zonke izinzwa ezinhlanu, ungahlola ukubona, ukuzwa, ukuhogela, ukuthinta nokunambitha ngqo ebuchosheni. Uma wazi futhi ukuthi ukusebenza kwesikhumbuzo kukuphi, ungalayisha izinkumbulo ebuchosheni bomuntu noma ukwabelana ngemicabango.
Ngakho-ke uma kungenzeka ukuba uxhomeke ebuchosheni kwi-inthanethi futhi unenethiwekhi ye-5G yomhlaba jikelele, wonke umuntu uyingxenye 'ye-intanethi yezinto'. Manje qonda ukuthi kungani inkampani iGoogle iqhume ngayo amakhulu ezinkulungwane, Ukuhleleka komlingo, ufuna ukuhlinzeka wonke umhlaba ngobunqamuleli obungokoqobo? Lokhu kungenxa yokuthi esikhathini esizayo esiseduze awudingi ukufaka izibuko ze-VR ukuze ubone ukungqimba okungokoqobo kwezwe langempela (ukungathandwa kwabathelisi esikubona). Lokhu kungokoqobo kungenziwa kubonakale ngokuqondile ebuchosheni bakho (esikhungweni esibukwayo sobuchopho bakho). Lokhu kuhlanganisa izinto ezifana nokuthinta, ukunambitha nokuhogela. Izwe langempela lizohlangana kancane kancane ne-virtual. Zonke izinkampani ezinkulu zezobuchwepheshe emhlabeni zifaka imali kulokhu.
Manje ungaba nomdlandla ngemibono enjalo. Ikakhulukazi uma ungumdlali weqhawe futhi uqaphela ukuthi esikhathini esizayo esiseduze ungakwazi ukuhamba ezweni langempela, kodwa ke umdlalo ubeka nje emhlabeni wangempela. Singabelana ngokuhlangenwe nakho esikhathini esizayo esiseduze nge-Snapchat no-Instagram, kodwa ke sihlolwe ngokuqondile ebuchosheni kanye nakho konke okuhlangenwe nakho okuzwakalayo okubandakanya. Imboni yezocansi izothuthuka kwi-intanethi. Enye ukunambitheka kwalokhu sibone ku-movie Demolition Man kusuka ku-1993. Abafundi bazokwazi ukuthola lonke ulwazi abaludinga efwini. Ngakho-ke ukutadisha kuyinto engafaneleki. Sizoba abakhi bokudala bezinto zangempela. Asikhulumi lapha ngeSciFi nezinto ezizohlala amashumi eminyaka. Sixoxa ngezentuthuko ezenzeka manje. Yingakho inethiwekhi ye-5G isivele ibaluleke kakhulu.
Phakathi naleso sikhathi, zonke izinhlobo zobuchwepheshe ezizosetshenziswa maduzane kubantu manje sezivele zibonakala ezweni lama robhotics. Siseduze lokuhlanganisa abantu nemishini kanye nakho konke okudingekayo ukuthi inethiwekhi enikeza umkhawulokudonsa ofanele kanye nesivinini kufakwe ngokugcwele. Yingakho inkampani i-Oneweb (www.oneweb.world) isikhala sesivele saqala ukugcwala ngama-satellites we-5G. Ukuthi ohulumeni basekhaya kanye nezinkampani ze-telecom zihamba kancane zihle futhi zihle, kodwa cishe azikho inkinga, ngoba uhlelo lokugcina lobugqila kufanele lufakwe ngokushesha ngangokunokwenzeka. U-Elon Musk usevele wayenecebo ku-2015 ukuvula isikhala nge-satellites ye-5G nge-SpaceX futhi ngoJanuwari 2019 futhi sabona izindaba ukuthi uzophambanisa isikhala nge-SpaceX nezinkulungwane ze-satellites ze-5G. Kungenzeka kanjani ukuthi indoda eyaxwayisa umhlaba mayelana nezingozi ze-AI (ukuhlakanipha kwengcebo) yabeka isisekelo sobuchwepheshe kuwo wonke amahlangothi ukuze i-AI ithathe isintu? Ngaphandle kwe-bandwidth efanele futhi ngaphandle kokuxhumeka kobuchopho, i-AI ngeke ibe yingozi. I-Musk ngokucacile inobuso nama-2 masks.
Ngokushesha sizobona ukuthi ama-robot athatha imisebenzi eminingi yabantu. Ama-robot e-ATLAS (chofoza isixhumanisi) nge-anatomy yomuntu, ngokuhambisana nobuchwepheshe kusukela ku-robot yesevisi ngezansi (onomqondo wokuzwela kuzo zonke izitho zakhe) angaba nomhlengikazi nezibhedlela. Kodwa ungaba namaphoyisa nemisebenzi yezempi ezithathwe ama-robot anjalo. Ngokushesha i-Nanotechnology izoqinisekisa ukuthi sizobona ama-robot anezicubu eziphilayo ezenziwe nge-nanotechnology. (Funda kabanzi ngaphansi kwevidiyo)
Kuthiwani ukuthi umngcele phakathi komuntu nomshini uzoqhubeka nokuqhubeka. Lona inkampani Ama-Cloudminds kakade uhlola ukuthi unganikeza ama-robot ngobuchopho efwini. Ngemuva kwalokho, ungafaka i-A kumprosesa kumkhanda we-robot, kodwa lelo hardware linikeza ubuningi obungaphezulu futhi liphinde libhekele umonakalo. Akuyona yini into elula kakhulu uma unayo yonke ibutho lamajoni e-robot onobuchopho bawo efwini? Udinga inethiwekhi ye-5G yalokho, ngoba leyo nethiwekhi inikeza amandla omkhawulokudonsa okwanele ukunikeza lokho kusebenza. Ubuchopho efwini nabo bungaba mkhulu kakhulu kunengqondo ekhanda. Ungakwazi ukuxhumanisa amakhompiyutha we-quantum kuma-robot bese ungenza ube mnandi kakhulu. Kuyiqiniso futhi kuyasiza ukuthi lobu buchwepheshe buvele buhlolwe kuma-robot lapho ubuchopho bomuntu buzoba maduze efwini elifanayo. Ngakho-ke isinyathelo esincane kuphela sokubeka lobu buchopho bomuntu ebuchwepheni obufanayo.
Phakathi naleso sikhathi, ukuthuthukiswa kwe-AI (intelligence yokufakelwa) kuyashesha futhi ngokushesha. Sisazi ukuthi i-A iyakwazi ukwenza ukuqashelwa kombuso ngokuqoqa idatha enkulu kuwo wonke amakhamera. Iningi labantu licabanga ngeChina kulo mfanekiso; izwe lapho lisetshenziswa ngokusobala. Nokho, kuba okuthakazelisayo kakhulu uma wazi izenzakalo zakamuva. Abacwaningi baseCarnegie Mellon University baye bahlakulela indlela yokwenza i-A iqonde ulimi lomzimba. Funda yonke into engezansi lesi sixhumanisi. Isiqu esivela kulesi sihloko sinikeza umqondo wokuthi lolu phuthukisa luzoholela kuphi:
Manje ukuthi uhlelo lunezi datha ezisethwe ngalo ikhamera eyodwa ne-laptop. Akusekho isidingo sekhasi elihlanganiswe nekhamera ukunquma ukuthi umzimba ubekaphi, okwenza ubuchwepheshe buhambe futhi bufinyeleleke. Abacwaningi sebevele bakhululwe ikhodi yabo emphakathini ukukhuthaza ukuhlolwa.
Bathi ubuchwepheshe bungasetshenziswa kuzo zonke izinhlobo zokuxhumana phakathi kwabantu nemishini. Kungaba nendima enkulu ekuhlangenwe nakho kwe-VR, okuvumela ukutholakala okunamandla kokunyakaza komsebenzisi ngaphandle kwekhompyutha eyengeziwe, njengama-stick-in sensors noma amagilavu.
Kungasiza futhi ukusebenzisana kwemvelo nge robot ekhaya. Ungatshela i-robot yakho ukuthi "ukhethe lokho," futhi ungaqonda ukuthi ubhekisela kuphi. Ngokubona nokuhumusha izenzo zakho zomzimba, i-robot ingafunda ukufunda imizwelo ngokulandelela ulimi lomzimba. Ngakho-ke uma ukhalisa ngokuthula ngobuso bakho ezandleni zakho ngoba i-robot kufanele yenze umsebenzi wakho, ingaba isisindo.
Isifinyezo esifushane salesi simo samanje ubuchwepheshe kufanele sikwenze ukuthi uqaphele ukuthi kwenzekani nokuthi sihamba ngokusheshisa kanjani. Zonke lezi zentuthuko kwezobuchwepheshe zenziwe ndawonye, ​​singabona ingozi enkulu. Lolu buchwepheshe ezandleni zikahulumeni kanye nokukhathazeka kwe-mega kwenza isikhala sokulawula okwedlulele phezu komuntu oyisho kuwe. Uma ngabe amanethiwekhi esekhona, yonke i-AI ihlolwe kuma-robotics, ukuxhuma kobuchopho kuye kwaqaphela futhi ngisho ne-DNA yethu ingashintshwa kusuka efwini, safika esimweni esiyingozi kakhulu. Umbuzo omkhulu wukuthi singathembela ohulumeni nezinkampani ezifana ne-Google ne-Facebook ukuthembela kulobu buchwepheshe. Umbuzo omkhulu kakhulu ukuthi ngabe kufanele ngempela sifune ukudluliselwa kancane komuntu? Singakuyeka kanjani le ngozi engozini? Noma kufanele sibone njengesinyathelo esingenakugwemeka esilandelayo ekuziphendukeni kwesintu? Uyakhumbula ifilimu engezansi? (Funda kabanzi ngaphansi kwevidiyo)
Uma kubantu abafana ne-CEO ye-Google Ray Kurzweil (nabanye abaningi), sizolahla i-biology yethu yakudala ye-2045 bese sihlangana ne-AI. Ufike ngezwi elihle kulokhu futhi ubiza lo mzuzwana wokuhlanganiswa 'ubuningi'. Ngaphambi kwalokho, umzimba womuntu uyoba ongapheli ngenxa yentuthuko yezobuchwepheshe echazwe ngenhla. Ngiye ngichaza kuphela i-tip ye-iceberg lapha, ngoba ungakwazi ukunikezela yonke incwadi kuwo, kodwa ukuze uthole umbono wokuqala lokhu kukwanele ukuthi uqonde ukuthi kwenzekani.
Uma sonke ngentuthuko tente, ungase bethola ukuthi ukungafi kokuphishekela transhumanists (onogqozi zonke lezi zenzakalo kubo zobuchwepheshe, okuyizinto zonke izingqimba phezulu izinkampani ezinkulu tech), Kuningi ukufana okukhona phakathi ngezibikezelo zenkolo. Ngale ndlela siyazi 'ukungapheli' 'kokuphila okuphakade' eBhayibhelini. Futhi uma kukhulunywa ngawo eBhayibhelini mayelana kudalwa "amazulu amasha nomhlaba omusha, ungase uyibeke lapho amaqiniso virtual lapho Ray Kurzweil iqagula ukuthi singaphila kanjani ngokuzwana 2045. Ngineluleka ngokufanele lesi sihloko ukufunda futhi. Lapha ngichaza ukuthi kungani lobu buchwepheshe buzoveza zonke izibikezelo zesiprofetho, kufaka phakathi ukubukeka kwesibalo somesiya esibhakabhakeni (ifu). Isixhumanisi ne-transgenderism (abantu abangebulili-abangathathi hlangothi) siphinde sicacile, njengoba kuchaziwe lesi sihloko.
Uma uxhuma zonke izingcezu ezingenhla ze-puzzle, ungase uqaphele ukuthi isikhathi sokuhlehliswa sesiphelile. I-revolution kumele iqale manje. Funda ngakho-ke lesi sihloko ukuthi ungadlala kanjani kulokhu. Kubalulekile ukuthi sigxume ubuchwepheshe obuya ngokuqhubeka nokusebenzisa iwebhu yonkana emhlabeni wonke. Uyabona ingozi? Yabelana ngalesi sihloko ngangokunokwenzeka!
Ukuze uthole ukuqonda okuhle kuyasiza ukuchofoza ngempela kuzo zonke izihloko ezixhunyiwe futhi uzifunde. Funda lapha umphumela.
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: oneweb.world, edgy.app, technocracy.news, cloudminds.com, spectrum.ieee.org, futurism.com
Okuhle kwedesitatimende kazwelonke ye-DNA ngaphezu kokuxazulula amacala okubulala
Kungabe imithi ingasetshenziselwa ukujwayela i-DNA yakho?
Thenga isitifiketi sakho se-CRISPR manje ukuze uvumelanise i-DNA yakho futhi ube yi-bio-hacker
I-DNA esembatho sika-Anne Faber yaholela kuMichael Panhuis, kodwa sekwephuzile kakhulu!
Amathegi: 5G, cyborg, ama-cyborgs, Elon, afakiwe, Musk, inethiwekhi, amanethiwekhi, amarobhothi, isikhala, satellite, ama-satellites, Isikhala X, okungajwayelekile, ukudluliselwa
28 February 2019 ku-17: 51
Ukuthuthukiswa machine2machine usanda futhi kwashesha, yini abaningi abazi ukuthi Qualcomm, inkampani ngemuva intuthuko 5G (futhi 4G, 3G, 2G) kuba ngezinyathelo kulelo jele yedijithali noma njengoba mina ukuyibiza ukhuthaze * Smart Gulag *
"Phakathi kwezobuchwepheshe ezakhiwe yiQualComm Israel yi-m2m yenkampani (umshini wokumshiniyela) yesikhulumi seselula, okhulumela abantu. Kuyingxenye umzamo Qualcomm ukudala i "Inthanethi Konke," lapho izinto ngokukhalipha axhunyiwe ngokusebenzisa inhlanganisela eziphambili engenantambo amanethiwekhi, amamojuli, izinzwa kanye ne-software ukunika amandla exchange real-time kolwazi - oluxube ukhiye ithuthukiswe Qualcomm Haifa luhlobo , kusho inkampani. I-Tagg, idivayisi yokulandelela isilwane, iphakathi kwemikhiqizo eyakhiwe kusukela kulokho buchwepheshe. "
"Phakathi kokunikezwa okukhulu kwe-QualComm kwezobuchwepheshe beselula kwakusungulwa izinga le-CDMA (iCode Division Multiple Access), okwakusungula indlela yokuxhumana okusheshayo kwe-3G no-4G. Amaqembu akwa-Israyeli asize ekuthuthukiseni izindinganiso zalabo buchwepheshe, kusho uJacobs. "
Ngenkathi iMicrosoft eyaziwa ngezinto eziningi, yaziwa ngeWindows - futhi iminyaka, amahemuhemu agijimile iminyaka eyakhiwe kwa-Israyeli. Ama-Windows "i-Israel." AmaGates, angazi, wayengabalwa, kodwa "wayejabule kakhulu"
I-Tagg idivayisi ye-tracking ye-cap 😀 nezinxenye ezinkulu ze-Windows ziyaqala ukwenza izibalo ku-Israyeli ... 😉
6 March 2019 ku-17: 28
6 March 2019 ku-22: 30
28 February 2019 ku-18: 00
Ngaphambi kokuba i-robot ifike, umuntu kufanele kuqala athole inani elikhulu lemininingwane ukuze avivinye ukulungiswa kwephethini, i-Microsoft / i-Apple / i-Google yonke into ehilelekile kanye nedatha enkulu yilo gama lemilingo ....
28 February 2019 ku-18: 15
Yebo yebo akukho 5G kwa-Israyeli
1 March 2019 ku-15: 05
I-ZiB, Akukho 5G kwa-Israyeli, ingabe uqinisekile?
ff imizuzu engu-10 iyahamba "kwinethiwekhi ye-5G yakwa-Israyeli" inikeza isithombe esihlukile (zama nje)
Ngabe hlobo luni lwabantu abathiwa u-Israyeli akatholi i-5G? Yini esekelwe kuyo?
Ubani ohambisa le disinfo? Ama-shill akhokhelwayo bese "i-sheeple"? Kubonakala sengathi.
28 February 2019 ku-18: 32
Yebo, futhi kubonakala sengathi abantu abaningi benza kahle futhi abenzi lutho ngalezi zintuthuko. Siyazi ukuthi ngubani owalandela kodwa u-Yebo, ukuthula, ukuhlukumezeka okucashile esiphila ngakho ngaphandle kwalokho labo bantu bazobe benesibopho salokhu. Ngeshwa, ngakho-ke.
Yebo, abakholi beqiniso bangabantu abahle, abangathembeki abangeke bavuse impindiselo yangempela. Angikwenzi lokho noma kunjalo, kodwa angizange ngicabange uma umphakathi jikelele ungashintsha ngokuzenzakalelayo kulokhu. Lokho kungaba intando yabantu abanobuhle ngaphezu kukahulumeni. I-Ah, i-Dutch, i-zombination lapha ayike kwenzeke ngaphandle kokuthi iqondiswe ngabasolwa bethu.
28 February 2019 ku-18: 35
Ihamba ngendlela engafanele. Lezi zintuthuko kumele zimiswe. Kunoma yikuphi, okungafunwa ngeke kulungele ukuphila phakade. Lezi zizocatshangelwa ngezinga elinamandla (futhi ngokomzimba).
1 March 2019 ku-14: 23
Zonke enhle kakhulu, kodwa lapho ngibona shills efanayo engase isize lelisu chemtrails, pizza esangweni, 911 TIG nezinye psy-ops / hoaxes nekhava ups, yini obungayenza Ngidinga 5G inethiwekhi?
Asazi lutho, futhi yingakho (?) Sizobuyela emuva njengezimvu.
Kuyahamba njalo njalonjalo. Futhi-ke ngifunda imibono ngaphansi kwevidiyo ku-YT bese kuthi:
"Ngimangaze ukuthi kungani u-Israyeli engagudluli inethiwekhi ye-5G"
Futhi lokho kubonakala kungamanga futhi.
Futhi ngithatha ukuphila okuphakade ngotshani kasawoti, eqinisweni, angikholwa.
Ukufiphaza noma ukufa kwendlala kufanele kwenzeke.
1 March 2019 ku-21: 14
Lokho shills ukuthi iqiniso nge umbhedo mix ekugcineni kuqhunyiswa inetha umkhumbi-ukuphepha, kumele kube sobala ... izibonelo yavama (George van Houts, uRonald Bernard, Ole Dammergard, Jim Fetzer, nokunye).
Nokho, lokho akusho ukuthi ubuchwepheshe abukho kulolu hlobo. Kulula kakhulu ukujula kulokho engibhalayo futhi ngithole ukuthi asikhulumi ngendabuko, kodwa mayelana nesayensi / commercial yangempela
Okwenzayo (ukukhipha ingane ngamanzi okugeza) yiyona impendulo ngqo ukuthi lezi shills kwadingeka zilethe.
1 March 2019 ku-10: 55
Yini echazwe lapha isekelwa imithombo eminingi ...
Uma kwenzeka ingozi, kabili ngokulingana futhi kathathu iphethini
1 March 2019 ku-17: 51
I-Riffian, Ikakhulukazi imizuzu yokuqala ye-27 engingayilandela, kodwa ngilahlekelwa intambo kusuka ngomzuzu 27: 12 kuya ku-28: 31. Ngizoba nami. Ingabe ngempela ubuke kude kangaka?
Angazi ukuthi inkinga yabo iyini, noma bayajabula? Angiqondi lutho nakancane. Noma ingabe yi-luciferans ngasese eyenzeka njengamaKristu? (Ngakho-ke ama-shills njengoba kwakunjalo)
Kuyinto evamile kakhulu kwezinye izindaba zezindaba ezithi amaKristu amanga azigcina izimvu zamaKristu zilawulwa ngezindabakwane ezifana nokuza koMsindisi ngendlela kaJesu Kristu.
Njengoba ngikhathazekile, i-trunews ingumzila we-disinfo okufanele amaKristu abambe.
2 March 2019 ku-11: 15
Umlayezo oyinhloko wokuthi le tech iholela ejele elizayo manje elisakhayo. Ungase futhi ulalele inguqulo ehlanzwe 😀
2 March 2019 ku-06: 32
Kuyathakazelisa kakhulu ukuthi kuzokwenzekani. Noma kunjalo, ngicabanga ukuthi kwenzeke ngaphambili nokuthi uma umuntu ebenza ngokwakhe phezulu kangangokuthi ulingana nonkulunkulu walesi sizwe, yonke into izobe isethwe kabusha. Abaningi bayoba kude kakhulu nabo ngokwabo ukuthi nje abanalo ulwazi lokusinda.
Kumele ucabange ukuthi ubona leli zwe ngeziglasi ezibomvu esasizitholayo. Uma ungazange uthuthuke futhi ungatshalanga ukuthi lokhu kwenzeka kanjani. Khona-ke konke kubanda kakhulu ophahleni lwakho, ngoba kuhamba ngempela kakhulu eminyakeni edlule neminyaka ezayo.
Umkhumbi kaNowa awukho nje ibhokisi, umkhumbi nawo unamanani afanayo njengebhokisi. Ungangena endabeni yokuphila okuphakade kule planethi, kodwa wazi ukuthi ulapha ukushiya okubi. Okuphambene nobubi akuphili lutho. Uma uxhuma ne-intanethi ke awuhlali ngempela futhi kubi. Ngokufa ungabalekela lapha, awusabi lutho. Akekho ukuzibulala ngoba uzovuka uphinde ukhale isisu noma ngokushesha ku-cyborg.
Asikwazi ukuphika ukuthi asidingi i-intanethi yentuthuko yethu, kodwa sesivele sinqamule umngcele.
Wake wake wazibuza ukuthi ubani owenze lezi zilwane ezincane? Mhlawumbe babengabasindile bokusetha kabusha kwangaphambilini.
Mhlawumbe uqale ukuqhuba ngamatshe athile anamatshe kanye nomnsalo nomcibisholo.
Sizoyithola noma asitshele ukuthi sizokuzwa isikhathi esisodwa.
2 March 2019 ku-14: 30
... echaza nge-Qualcomm / 5G
UCristiano Amon, indoda ephezulu eQualcomm, ungeze ukuthi i-5G yenza ama-movie we-4K asakaza kalula njengokusakaza umculo. Oh lula 😀
I-5G kufanele futhi ibaluleke kakhulu ekukhethweni kwefu. "Uzogcina yonke into efwini esikhathini esizayo", kusho u-Amon waseQualcomm. "Manje kukhona namanje izinhlelo zokusebenza eziningi ku-smartphone yakho, ekugcineni uzothola konke efwini nezinhlelo zokusebenza ezahlukene efonini yakho engadingekile." Ngu ukuthi kusho ukuthi ulwazi olulondolozwe efwini, hhayi ngokwenyama amafoni.
okufanayo sibona Microsoft nge yabo 365 Omunye izixazululo-Drive ifu futhi Google..De zamagama ukuthi yonke idatha ziyatholakala emhlabeni wonke shazi nokusebenzisa Quantum Computing wukuthi ucezu kamuva ikhekhe ...
futhi nakanjani nge-algorithm ezifanele izinto ezithile zingavinjelwa ngesikhathi 😉
2 March 2019 ku-16: 43
ocwaningweni Israeli zembula kube nomhlangano wamazwe omhlaba ukuthi amaza efanayo kagesi esetshenziselwa izikhali ukulawula isixuku, yakha isisekelo we 5G inethiwekhi zakamuva, angaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezingu 50 esihlanganisa amadivayisi (IoT). Ukuhlolwa kwamanje kwamanethiwekhi angenantambo ku-millimeter kanye no-submillimeter range uqinisekisa ukuthi lawa maza ahlangana ngokuqondile nesikhumba somuntu, ikakhulukazi izigulane zomzimba. UDkt. UBheni-Ishai uMnyango Physics, isiHebheru University, muva Israyeli wachaza indlela iziteshi womuntu umjuluko abe uchungechunge antenna Helical nge ukuchayeka zale yamaza.
Ososayensi baxwayisa ukuthi ngaphambi kokuba ubuchwepheshe be-5G busetshenziswe ukuthi basebenzise lezi zikhathi, ukucwaninga ngemithelela yezempilo yabantu kufanele kuqala kwenziwe ukuze kuqinisekiswe ukuthi umphakathi kanye nemvelo kuvikelwe.
Ingabe kube khona izifundo? I-Ehh ayikho 😀
2 March 2019 ku-16: 46
Bani abaphikisana nabo, huh? Ngakho matasa ngokubaluleka komuntu. Futhi sinobugebengu kuphela futhi esibucayi. Bazuza i-ribbon. Yiziphi abantu ezikhethekile okwamanje. Kuch.
Isimo shintsha i-asap!
3 March 2019 ku-08: 35
ihlale iqhubeka ukuqagela okuyiqiniso. Kunoma yikuphi, isikhala esikhulu se-Space X siyinkohliso, kufaka ukuthi i-cheers evela kubo bonke abantu.
3 March 2019 ku-16: 18
Into kuphela Ngiyabona kusukela yalezi zigigaba zobuchwepheshe noma izinhlelo wokuqagela ukuthi sibona ngokusebenzisa imigudu evamile, cabanga Black Mirror ku-Netflix ukuthi ingqalasizinda 'Sesame Credit' uhlelo usebenzisa IoT (5G) zinyanga esiteji kubalulekile iya. Thina ukukhulisa leli phuzu konke ndawonye ngokusebenzisa imisebenzi yethu kwi-Internet ohlelweni izilwane ngekusasa, futhi ngiyazi ke bafinyelela esiphethweni ukuthi mina ungasafuni ukondla isilo AI futhi ngenxa yalokho zingenalo faka engenzeki esizayo ngaphandle kwe-intanethi / off grid. Okushiwo yi-ZiB noMartin lapha akusikho umculo ozayo okwenzeka lapho sikhuluma.
3 March 2019 ku-16: 23
Shayela lokho okufunayo ama-Merits, Izikweletu zihlehlela ngokufanayo ...
4 March 2019 ku-13: 22
Kuthiwani uma le Microsoft Hololens entsha iqala nje? Eminyakeni embalwa izithombe zizolayishwa ngokuqondile ebuchosheni futhi inethiwekhi ye-5G izoba ibaluleke kakhulu. Njengoba i-Google's Magic Leap yezwe lonke yenza 'indawo yokudlala' iba ngaphezulu kakhulu kwe-sexy! Kodwa ubani olawula inethiwekhi? Iwebhu lewebhu? Ubani isi-spider phakathi nendawo?
4 March 2019 ku-15: 44
Ubani olawula inethiwekhi? Ubani isi-spider phakathi nendawo oyicelayo. Lokhu akulula ukuphendula. Ubani manje olawula idatha nokugeleza kolwazi? Kwesokudla, abasolwa abasolwa. Ngubani omunye. Cui bono yonke imigwaqo iholela kubo.
4 March 2019 ku-19: 02
I-Akamai Technologies, Inc. kuyinto inethiwekhi yokulethwa kokuqukethwe kweMelika (i-CDN) kanye nomhlinzeki wenkonzo yefu e-Cambridge, eMassachusetts, e-United States. okuqukethwe ukulethwa inethiwekhi Akamani kungomunye basakaza Computing ezisekelweni esikhulu kunazo zonke emhlabeni, obhekene ukukhonza phakathi 15% futhi 30% wabo bonke traffic kuwebhu.  Inkampani Usebenza inethiwekhi amaseva emhlabeni wonke futhi Rents out umthamo kumaseva mqondo kumakhasimende abafuna amawebhusayithi azo ukusebenza ngokushesha ngokusabalalisa okuqukethwe okuvela ezindaweni eziseduze nomsebenzisi. Uma umsebenzisi ehamba nge-URL yekhasimende le-Akamai, isiphequluli sawo sithunyelwa kwenye yamakhophi ka-Akamai webhusayithi.
4 March 2019 ku-22: 37
Okuthakazelisayo ... Ngangingumphathi wezokuthengisa ku-AboveNet (manje u-Akamai).
Imininingwane eyinhloko: VP Paul A. waqhuba i-Porsche 911 futhi wayika njalo igumbi le-911 kumahhotela amakhulu
Siphuza kakhulu ubhiya ngesikhathi sekamelo le-911, kodwa lokho kwakungenxa yokuhlaselwa odumile i-PsyOp
I-Abovenet yatholwa yi-Metromedia Fibernetwork (i-Nasdaq MMF), kodwa yaphazamiseka ku-2002 (https://www.nytimes.com/2002/05/21/business/technology-metromedia-fiber-files-for-bankruptcy.html)
Kamuva baqala njengo-Akamaï (noma bathengiwe ekufeni) ngemuva kokuba inkampani yeSamsmith ithengwe ngemali eningi. Ngaleso sikhathi ngashiya umkhumbi odilikayo emncintiswaneni (owamemeza ngemuva kwe-telecom bubble).
Uma ngabe sengingazi manje ukuthi empeleni ngisebenza kuRupert Murdoch, ngabe ngabe ngizichelile ngandlela-thile ezindlebeni zami, kodwa lokho akukona okwakungenza ngaleso sikhathi.
5 March 2019 ku-17: 30
Siyabonga Martin salokhu info..Ik ezithakazelisayo hamba nakakhulu ukusho ukuthi Akamani kuyingxenye edumile Israeli Uhlelo Talpiot lapho Danny Lewin iwumkhiqizo wemvelo, 8200 Phiko okulingana US NSA. Ngakho-ke u-Murdoch akayona nje insizwa yase-Zionist ..
5 March 2019 ku-17: 46
I-Israel yi-Eye 2nd Ngaphandle kwe-6-Eyes.
5 March 2019 ku-19: 16
Indima yezinkampani ezimbalwa zama-Israyeli (izinkampani zangaphambili) ezenzweni zobuphekula ezifana ne-9 / 11, i-7 / 7 njll.
6 March 2019 ku-15: 32
6 March 2019 ku-16: 13
8 April 2019 ku-23: 31
Kuvame ukushiwo lapha kusayithi, iwashi ikhathaza ... ekugcineni livuka endaweni yami yangaphambili (yangaphambili)
9 April 2019 ku-15: 25
ah an Abma, sekuyisikhathi sokuba bagcine ama-Blockades eFryslan esikhundleni sikaZwarte Piet.
11 April 2019 ku-15: 59
« I-revolution isiqalile!
I-Microsoft Hololens 2 ukunambitha okungenzeka nge-uxhumano lobuchopho lwe-intanethi »
Ukuvakashelwa okuphelele: 9.361.845
I-Duncan ayikwazi ukucula futhi i-Eurovision Song Contest iphumelele (i-LGBTI propaganda)
Iqiniso eliphelele alikho?
Isikhathi sokuvula lewebhusayithi? QAPHELA 15-05-2019
UMartin Vrijland op I-Duncan ayikwazi ukucula futhi i-Eurovision Song Contest iphumelele (i-LGBTI propaganda)
I-RA Ukutholwa. op Ukhetho lwaseYurophu kanye ne-FvD net net ('ukudlwengula ngesibonelo sabafiki)
Joyina abanye ababhalisile abangu-1.592